Free Thinker: ယုန်သူငယ် ၊ပညာ၏တန်ဖိုး နှင့် ကာလာမသုတ်
အခါတစ်ပါးတွင် ယုန်သူငယ်တစ်ကောင်သည် မြန်မာပြည်၊ နေပြည်တော်တိုင်းအတွင်းမှ တစ်ခုသော တောအုပ် အတွင်းရှိ ထန်းလက်ခြောက်တစ်ခုအောက်တွင် ၀ပ်လျှက် အင်း၊ ဂျပန်မှာ နျူကလီးယားစက်ရုံပေါက်ပတဲ့။ အက်စစ်မိုးဆိုလား ငါတို့ဆီမှာ ရွာမယ်လို့ ကောလဟလတွေထွက်နေတယ်။ အက်စစ်မိုးများရွာရင် ငါ ဘယ်သွားမိုးခိုရပါ့ ဟု အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ စဉ်းစားတွေးတောကာ စိုးရိမ်ပူပန်လျှက် ရှိ၏။ ထိုအခိုက် ရင့်မှည့်လျှက်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း မကြွေချင်သေးဟု အတင်းကုပ်ကပ်ကာ မိမိနေရာကို အတင်းဆုပ်တွယ်ထားသော ထန်းသီးအိုကြီးတစ်လုံးသည် သင်္ခါရသဘောကို မည်သို့မှ မလွန်ဆန်နိုင်တော့သောကြောင့် မကြွေချင်ဘဲ ကြွေကျလာလေ၏။ ထန်းသီးအိုကြီးသည် ပင်မြင့်ထက်မှ ခွေးကျဝက်ကျ ပြုတ်ကျလာလေရာ ယုန်သူငယ်ဝပ်နေသော ထန်းလက်ခြောက်ပေါ်သို့ ၀ုန်း ဟူသည့် ပြင်းစွာသောအသံကြီးကို ဖြစ်စေလျှက် ကျသတည်း။
ဂျပန်ငလျင်ကြောင့် အကြောက်ကြီးကြောက်လျှက်ရှိသော ယုန်သူငယ်မှာ မိမိအနီးတွင်ကပ်လျှက် ကြောက်မက် ဖွယ်ရာ အသံကြီးကို ကြားလေသော် ဟိုက်၊ ဂျပန်ငလျင် ငါတို့ဆီရောက်လာပဟ၊ ဧကန္တ ဒါ မြေပြိုတာဘဲ ဖြစ်မယ် ဟု ကြောက်လန့်တကြား အတင်းထွက်ပြေးလေ၏။
ယုန်သူငယ်ပြေးသည်ကို မြင်သော် ချေငယ်တို့က ဘာ့ကြောင့်ပြေးသနည်းဟု စူးစမ်း၏။ ယုန်ငယ်ထံမှ မြေပြိုကြောင်း သိရသော် သူတို့လည်း ရောယောင်ပြေးကြ၏။ ယုန်နှင့် ချေငယ်တို့ပြေးသည်ကို မြင်သော် သမင်တို့က ဘာ့ကြောင့်ပြေး သနည်း ဟု စူးစမ်း၏။ ထို့နောက် သမင်တို့လည်း ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နှင့် ပြေးကြပြန်၏။ ထိုမှတဆင့် တောဝက် တို့သည်လည်းကောင်း၊ ခွေးအတို့သည်လည်းကောင်း၊ နောက် သားကောင်ကြီးများဖြစ်သော မြင်းကြား၊ ကျားသစ်၊ ကျား၊ ဆင် စသည်တို့လည်း ပြေးကြပြန်ရာ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး (ဟုတ်ပေါင် ယောင်လို့) တောအုပ်တစ်ခုလုံး အုံးအုံးကျွက်ကျွက် ဖြစ်ကြကုန်၏။
တောနေသားကောင်အပေါင်းတို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ပြေးလွှားနေသည်ကို တွေ့ရသည့် ခြင်္သေ့မင်းသည် တစ်ခုသော အကောင်ကို ဘာဖြစ်ကြတာတုံးကွယ်ရို့ ဟု မေးမြန်းစုံစမ်း၏။ ထိုအခါ ထိုအကောင်က မြေပြိုလို့ပါ အရှင်မင်းကြီး ဟု သံတော်ဦးတင်၏။ မြေပြိုတာကို မင်းမြင်ခဲ့သလားကွဲ့ ဟု ကေသရာဇာက မေး၏။ ဟင့်အင်း၊ ကိုသောင်းတန်ပြောတာပဲ ဟု (ဟုတ်ပေါင်) ဟိုက ခွေးအ ပြောတာပဲဟု ဖြေ၏။ ခွေးအကိုမေးပြန်သော် ကျားသစ်ကို လက်ညှိုးထိုး၏။ ကျားသစ်မှ ဆင်၊ ဆင်မှ - - - - - နောက်ဆုံး ယုန်သူငယ်ဆီရောက်သတည်း။
ခြင်္သေ့မင်းက မြေပြိုတယ်လို့ပြောတာ မောင်မင်းလားကွဲ့။ မြေပြိုတာကို မင်းမြင်ခဲ့လို့လား ဟု မေး၏။ မြေပြိုသံကြီးကို ကျွန်တော်မျိုးကြီး နားနဲ့ ဆတ်ဆတ် ကြားခဲ့ပါတယ်ဘုရား ဟု ယုန်သူငယ်လည်း တင်လျှောက်၏။ ကိုင်း၊ မောင်မင်း။ င့ါကို မြေပြိုတဲ့နေရာလိုက်ပြစမ်းကွယ် ဟု ပြောလေသော် ယုန်သူငယ်လည်း သူဝပ်ခဲ့ သော နေပြည်တော်အနီး တောအုပ်အတွင်းမှ ထန်းလက်ခြောက်ကို ပြသတည်း။
ထိုမှ အဖြစ်မှန်ကိုသိလေသော် အင်း၊ မင်း သေသေချာချာ မစဉ်းစား မတွေးခေါ်တတ်တာ မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးကွဲ့၊ မင်းကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်း အဲလေ ပညာရေးစနစ်ကြီးရဲ့အပြစ်ပေဘဲ။ ဒီကိစ္စလွှတ်တော် အမြန်ခေါ်မှ ဖြစ်မယ်ဟု ခြင်္သေ့မင်းလည်း စဉ်းစားတွေးတောကာ နေလေသတည်း။
ဂျပန်ပြည်တွင် ငလျင်လှုပ်သော် ပထမ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြ၏။ မတုန်လှုပ်သေး။ ထို့နောက် ငလျင်ပြင်းအားမှာ 8.9 – 9.0 ထိတက်လာပြီးနောက် နျူကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖိုကြီး မီးလောင်လေသော် တစ်ကမ္ဘာလုံး ကြိမ်မီးအုံးသို့ဖြစ်သတည်း။ အခြားသူများကြိမ်မီးအုံးသည်ထက် ကျွန်တော်တို့ ကိုရွှေဗမာများကြိမ်မီးအုံးခြင်းက တမူထူးခြားလေသည်။ (သို့သော် အင်တာနက်တွင်ရှာကြည့်ရာ ဤကောလဟလမှာ မြန်မာများအကြားတွင်မဟုတ်၊ အာရှတလွှား (ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား စသည်) မှာပါ ပျံ့နှံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကောလဟလကား အက်စစ်မိုးများ ရွာတော့မည်၊ သတိထားကြပါ ဟူ၏။ အောက်ပါ မက်ဆေ့ခ်ျကို ကြည့်ပါ။
ထိုနေ့က ကျွန်တော့်ထံ telephone message များ တတွမ်တွမ်နှင့် ရောက်လာပါသည်။ မိတ်ဆွေများရသော sms အတိုင်းဖြစ်ပါ၏။ မြန်မာပြည်သား လူအပေါင်းတို့လည်း အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်၏။ ကျွန်တော့်ကို စိုးရိမ်တကြီး သတင်းပေးပို့ ကြသော မိတ်ဆွေအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် --
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့သည် နလဗိန်းဒုံးများ မဟုတ်ကြပါ။ အားလုံး ထိုက်သင့်အားလျော်သော ပညာကို တတ်မြောက်ထားသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ၀င်လာသော ဖုံးမက်ဆေ့ခ်ျများ မည်မျှမှန်ကန်သနည်း ဆိုသည်ကို မိမိဘာသာ ဆန်းစစ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ပထမ မက်ဆေ့ခ်ျထဲတွင် ရည်ညွှန်းထားသော BBC Flash News တွင် ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ လက်ညှိုးထိပ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏သတင်းကို အချိန်မရွေး ကြည့်နိုင်သော အခွင့်အရေး ရှိနေပါသည်။ ထို BBC Flash News တွင် ဘာပါသနည်း။ ဘာမှ မပါပါ။
ဒါဆို ဒုတိယ - နျူကလီးယား ရေဒီရေးရှင်းကြောင့် အက်စစ်မိုးရွာနိုင်သလား ဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။
ပထမ Nuclear Radiation ဆိုတာဘာလဲ ကြည့်ရအောင်။
All particles and radiations emanating from an atomic nucleus due to radioactive decay and nuclear reactions. Thus the criterion for nuclear radiations is thatanuclear process is involved in their production. The term was originally used to denote the ionizing radiations observed from naturally occurring radioactive materials. These radiations were alpha rays (energetic helium nuclei), beta rays (negative electrons), and gamma rays (electromagnetic radiation with wavelength much shorter than visible light). See also Alpha particles; Beta particles; Gamma rays.
A striking difference in the absorption of the three types of radiations is that only heavy charged particles havearange. That is,amonoenergetic beam of heavy charged particles, in passing throughacertain amount of matter, will lose energy without changing the number of particles in the beam. Ultimately, they will be stopped after crossing practically the same thickness of absorber. For electromagnetic radiation (gamma rays) and neutrons, on the other hand, the absorption is exponential. The difference in behavior reflects the fact that charged particles are not removed from the beam by individual interactions, whereas gamma radiation photons (and neutrons) are removed. Electrons exhibitamore complex behavior. See also Electron; Nuclear reaction.
Nuclear radiations are used in biology because of their common property of ionizing matter. This makes their detection relatively simple, or makes possible the production of biological effects in any living cell.
Ionizing radiation is any electromagnetic or particulate radiation capable of producing ions, directly or indirectly, in its passage through matter.
All ionizing radiations produce biological changes, directly by ionization or excitation of the atoms in the molecules of biological entities, such as in chromosomes, or indirectly by the formation of active radicals or deleterious agents, through ionization and excitation, in the medium surrounding the biological entities. Ionizing radiation, having high penetrating power, can reach the most vulnerable part ofacell, an organ, orawhole organism, and is thus very effective. In terms of the energy absorbed per unit mass ofabiological entity in which an effect is produced, some ionizing radiations are more effective than others. The relative biological effectiveness (RBE) depends in fact on the density of ionization (also termed the specific ionization or linear energy transfer, LET) along the path of the ionizing particle rather than on the nature of the particle itself. Relative biological effectiveness depends also on many other factors. See also Radiation biology.
The medical uses of nuclear radiations may be divided into three distinct classes:
1. The radiations, which are principally x-rays, are used to study the anatomical configuration of body organs, usually for the purpose of detecting abnormalities as an aid in diagnosis.
2. The radiations are used for therapeutic purposes to produce biological changes in such tissues as tumors.
3. The radiations are used asasimple means of tracingasuitable radioactive substance through different steps in its course through the body, in the study of some particular physiological process.
Particulate and electromagnetic radiation emitted from atomic nuclei in various nuclear processes. The important nuclear radiations, from the weapons standpoint, are alpha and beta particles, gamma rays, and neutrons.
All nuclear radiations are ionizing radiations, but the reverse is not true; X-rays, for example, are included among ionizing radiations, but they are not nuclear radiations since they do not originate from atomic nuclei.
US Defense Department Military Dictionary:
(DOD, NATO) Particulate and electromagnetic radiation emitted from atomic nuclei in various nuclear processes. The important nuclear radiations, from the weapon standpoint, are alpha and beta particles, gamma rays, and neutrons. All nuclear radiations are ionizing radiations, but the reverse is not true; X-rays for example, are included among ionizing radiations, but they are not nuclear radiations since they do not originate from atomic nuclei.
နောက်ပြီး အက်စစ်မိုးဆိုတာဘာလဲ။ လေ့လာကြည့်ပါ။
"Acid rain" isapopular term referring to the deposition of wet (rain, snow, sleet, fog, cloudwater, and dew) and dry (acidifying particles and gases) acidic components. A more accurate term is “acid deposition”. Distilled water, once carbon dioxide is removed, hasaneutral pH of 7. Liquids withapH less than7are acidic, and those withapH greater than7are alkaline. “Clean” or unpolluted rain hasaslightly acidic pH of over 5.7, because carbon dioxide and water in the air react together to form carbonic acid, but unpolluted rain also contains other chemicals.
The principal natural phenomena that contribute acid-producing gases to the atmosphere are emissions from volcanoes. Thus, for example, fumaroles from Laguna Caliente crater of Poás Volcano create extremely high amounts of acid rain and fog with acidity2of pH, clearing an area of any vegetation and frequently causing irritation to the eyes and lungs of inhabitants in nearby settlements. Acid-producing gasses are created also by biological processes that occur on the land, in wetlands, and in the oceans. The major biological source of sulfur containing compounds is dimethyl sulfide.
ဒါဖြင့်ရင် နျူကလီးယားရေဒီရေးရှင်းကြောင့် အက်စစ်မိုးရွာတယ်ဆိုတာ အရူးချေးပန်းလျှောက်ပြောထားတာ ဆိုတာ သိပ် သေချာပါတယ်။ ရေဒီရေးရှင်းနဲ့ အက်စစ် ဘယ်လိုဆက်စပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ဦးဏှောက် တစ်မိုက်လောက်နဲ့ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်တွေးခေါ်လို့ မရကြောင်းပါခင်ဗျား။
အောက်မှာ ဦးထွန်းလွင် ရေးထားလေး ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဒီကနေ့တစ်နေ့လုံး သာဂိတော့ ကံမကောင်းပါဘူးဗျာ။ ဆက်လိုက်ကြတာ မေးလိုက်ကြတာ။ တစ်နေကုန် ပါဘဲ။
မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ? တဲ့။
ဂျပန်က နျူကလီယာဓါတ်ပေါင်းဖိုတွေပေါက်ကွဲကုန်လို့ မြန်မာပြည်မှာ အက်ဆစ်မိုးတွေ ရွာမယ်၊ အာဆီယံနိုင်ငံတွေ အားလုံး ထိခိုက်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ? တဲ့။ အင်ဒိုနီးရှားကစပြီး သတင်းထုတ်တာတဲ့။
ကဲဗျာ။ တစ်ခုချင်း စဉ်းစားကြရအောင်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ အခုအချိန်အထိ ဘာမုန်တိုင်းမှ မရှိပါဘူးဗျာ။ မုန်တိုင်းဝေးလို့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတောင် ပီပီပြင်ပြင်မရှိသေးပါဘူး။ လောလောဆယ် မုန်တိုင်းစမယ့်အလားအလာ ပြနေတာကတော့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒယာ (ကမ္ဘာ့တောင်ဖက်ခြမ်း)ဘဲရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းက ဂျပန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဖက်ပိုင်းမှာ အင်အား ၉.၀ လောက်ရှိတဲ့ ရေအောက်ငလျင်ကြီးလှုပ်လို့ ဆူနာမီရေလှိုင်းတွေ တက်လာရာမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်သေကျေ ခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုးဆုံး ကတော့ နျူကလီယာဓါတ်ပေါင်းဖို(၅)ခုအနက် Fukushima Power Plant မှာရှိတဲ့ Reactor လေးခုကို မြေငလျင်လှုပ်ရှားမှုဒဏ် နဲ့ ဆူနာမီရေလှိုင်း ဒဏ် ခံခဲ့ရလို့ ဓါတ်ပေါင်းဖိုတွေရဲ့ cooling system တွေ ပျက်ပြားသွားခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအအေးခံတဲ့ စံနစ်တွေပျက်ပြားသွားခဲ့တဲ့အတွက် ရေတွေခမ်းသွားပြီး၊ ဓါတ်ပေါင်းဖိုအတွင်းမှာ ရှိကြတဲ့ (၄)မီတာ အရှည်ရှိတဲ့ သံမဏိချောင်းတွေ အပူချိန်မြင့်တက်လာစေပါတယ်။ နောက်တော့ အရည်ပျော်ကျ ကုန်တယ်။ ဒီနေရာမှာ စက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အရေးပေါ်အအေးခံစံနစ်တွေနဲ့ အလိုအလျောက် အအေးခံပေးခဲ့ရာမှာ အဲဒီအရေးပေါ် စံနစ်ကပါ ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ တတိယအဆင့် SR(Safety Relief) ကိုသုံးပြီး အအေးခံစေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုသုံးရာမှာလည်း ပထမ Nuclear Plant ကတော့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ reactor ဟာ ပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ တစ်ခါ ဒုတိယ Plant မှာ reactor ထပ်ပေါက်ကွဲသွားပြန်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး တတိယ Reactor ပါ ပေါက်ကွဲသွား ပြန်ပါတယ်။
အခုတော့ ပင်လယ်ရေများကို သွင်းပြီးအအေးပေးတဲ့စံနစ်ကို သုံးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့4m ရှည်တဲ့ Fuel Rod တွေကို ထက်ဝက်2m ခန့်ရေမြုပ်အောင် လုပ်ပေးထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချရပြီလို့ မပြောနိုင်သေးပေမယ့် အန္တရာယ်ရှိမှုဟာ သာမာန် အဆင့်ထက် မကျော်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီမှာ သတင်းတွေက ၀င်လာတော့တာဘဲ။ နျူကလီယာဓါတ်ပေါင်းအိုးတွေပေါက်လို့ မြန်မာပြည်မှာ အက်ဆစ်မိုးတွေ ရွာတော့မယ် တဲ့။ မိုးရေတွေ မချိုးကြပါနဲ့တဲ့။ အပြင်မထွက်ကြပါနဲ့တဲ့။
(၁) Nuclear Plant ကနေ Radioactive ဓါတ်ငွေ့တွေ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်လာရင် ဒါဟာ အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားပါတယ်။ ဥပမာ Chernobyl Incident ဟာ အကောင်းဆုံး ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ အများအားဖြင့် local incident တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဂျပန်နိုင်ငံမှာတောင် လောလောဆယ်မှာ radiation level ဟာ အန္တရာယ်အဆင့် မရှိသေးပါဘူး။ စောင်ကြည့်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Nuclear Plant တွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ ရှိနေပြီး၊ အဲဒီ နေရာနဲက အနီးဆုံးနိုင်ငံဟာ ရုရှားနိုင်ငံအရှေ့ဖက်အစွန်းဒေသဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လည်း radioactivity level ဟာ အခုအထိ ပုံမှန်ရဲ့အောက်မှာဘဲ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် alert တော့လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိခိုက်မှုကတော့ အနည်းဆုံးသာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
(၄) Nuclear Plant က Nuclear Bomb လို ပေါက်ကွဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓါတ်ငွေ့တွေ ယိုစိမ့်လာပြီး လူတွေကို ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်စေမှာကိုသာ စိုးရိမ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) လောလောဆယ် ဂျပန်အပေါ်မှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေတွေဟာ အားကောင်းတဲ့ အနောက်လေစီးကြောင်းတွေသာဖြစ်တဲ့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓါတ်တွေဟာ ဂျပန်ရဲ့ အရှေ့ဖက် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒယာထဲကိုသာ ရွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ယခုအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးသက်ရောက်ဖို့ အခြေအနေ အလွန်နည်း (လုံးဝမရှိ သလောက်)ပါဗျာ။
နောက်ပြီး အောက်ကဟာလေးလဲ ဖတ်ပါအုံး။
The operator of the stricken Fukushima nuclear plant No. 1 on Saturday saidareactor container was not damaged
A fake text message after the tsunami in Japan is surrounding that the radiation leaked from the Fukushima nuclear plant in Japan. This message is faked and it says the radiation is leaked. The founder of this message state this news is reported by BBC in its flash News. This message spreads in whole Asia in no time, and I receive this message in pakistan as well. People from Philippines are also receiving this message, and all are worried about it. The BBC news has issuedastatement, and they deny this text message and tell BBC not issue this news and its totally faked.
အခါတစ်ပါးတွင် မြတ်စွာဘုရားအား ကာလာမသတို့သားတို့က အောက်ပါအတိုင်း မေးလျှောက်၏။
“အရှင်ဘုရား၊ ကေသပုတ္တိသို့ ရသေ့ပုဏ္ဏားအချို့တို့ ရောက်ရှိလာကြပါသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ အယူဝါဒများကိုသာ ရှင်းလင်းပြကြ၍ ထင်ရှားစေကုန်ကြပါသည်။ သူတစ်ပါး၏ အယူဝါဒများကို မထီလေးစား ပြုကြပါသည်။ ရှုတ်ချကြပါသည်။ ပစ်ပယ်ကြပါသည်။ ထို့နောက် အခြားက ရသေ့ပုဏ္ဏားတို့ ရောက်လာကြပြန်ပါသည်။ သူတို့ကလည်း သူတို့၏ အယူဝါဒများကိုသာ ရှင်းလင်းပြကြ၍ ထင်ရှားစေကုန်ကြပါသည်။ အခြားသူများ၏ အယူဝါဒများကို မထီလေးစား ပြုကြပါသည်။ ရှုတ်ချကြပါသည်။ ပစ်ပယ်ကြပါသည်။ ဘုရားတပည့်တော်တို့မှာ ကြည်ညိုလေးမြတ်ဘွယ်သော ဤရသေ့၊ ပုဏ္ဏားတို့တွင် မည်သူက အမှန်စကားပြော၍ မည်သူက မမှန်တရား ဟောသွားကြသည်ကို မဝေခွဲနိုင်အောင် အစဉ်စိတ်ရှုပ်ထွေးကာ သံသယဖြင့် တွေဝေလျှက် ရှိကြရပါသည် ဘုရား။”
ထိုအခါ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်က အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် မြွက်ကြားတော် မူလိုက်သည်။
“ဟုတ်ပေသည် ကာလာမအမျိုးသားတို့၊ ယုံမှားဖွယ်ရာကိစ္စတွင် သံသယဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် သင်တို့သည် ယုံမှားသံသယ ရှိသင့်ကြပေသည်။ စိတ်ရှုပ်ပွေခြင်း ဖြစ်သင့်ကြပေသည်။ ယခု ရှုကြပေလေ့ာ၊ ကာလာမ အမျိုးသားတို့။
သတင်းစကားကို ကြားရုံမျှဖြင့် နားမယောင်နှင့်။ အစဉ်အလာဖြစ်ပေသည် ဟူ၍လည်း လက်မခံနှင့်။ လူပြောသူပြော တစ်ဆင့် စကားကိုလည်း မယုံလေနှင့်။ ဘာသာရေးကျမ်းကြီးများကို ကိုးကားပြော၍လည်း မှန်လှပြီဟု မထင်လေနှင့်။ တက္ကနည်းနှင့် ဆင်ခြင်ကြံဆ ယူရုံမျှကိုလည်း နားမယောင်လေနှင့်။ ပုံပန်းသဏ္ဍာန် အမြင်ကိုကြည့်၍လည်း မဆုံးဖြတ်လေနှင့်။ ရော်ရမ်း မှန်းဆယူရသောသဘော ထင်မြင်ချက်တို့ကိုလည်း အမှန်ဟု မမှတ်ယူလေနှင့်။ ဖြစ်နိုင်ကောင်း၏ ဟု ထင်မြင်ရယုံနှင့်လည်း မယုံကြည်ပါလေနှင့်။ အသင်တို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာ ဆရာသမားဖြစ်ပေသည်ဟူသော သဘောကြောင့်လည်း မှန်လှပြီဟု တထစ်ချ မမှတ်ကြကုန်ရာ။
အို၊ ကာလာမနွယ်ဖွား အမျိုးကောင်းသားတို့ -
အချို့သောအကြောင်းတရားသည် အကုသိုလ်ဖြစ်သည်၊ မမှန်ကန်၊ မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေသည် ဟု သင်တို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သိရှိ၏။ ထိုအကြောင်းတရားများကို စွန့်ပယ်ကြကုန်လော့။ အချို့အကြောင်းတရားများမှာမူ ကုသိုလ်ဖြစ်သည်၊ ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေသည် ဟု သင်တို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိရှိ၏။ ထိုအကြောင်းတရားများကို နှစ်သက်စွာလက်ခံ၍ လိုက်နာ ကျင့်ကြံကြပေတော့။
သည်ကိစ္စတွင် မည်သူ ယုန်သူငယ်ဖြစ်သနည်း ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ မည်သူမျှလည်း မသိနိုင်ပါ။ သို့သော် ယုန်သူငယ် မည်သူဖြစ်သည် ဆိုခြင်းထက် ကျွန်တော်တို့မှာ ထို ယုန်သူငယ်နောက် ရှောက်ပြေးလိုက်နေသော တောခွေးအ များ မဖြစ်ဖို့ ပို အရေးကြီးပါသည်။ သတင်းပေးတာ ပေးတာပဲ။ သို့သော် မဟုတ်သော သတင်းကို ပေးခြင်းကတော့ မည်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိပါ။
ဒါဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ ဟု ကျွန်တော် ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး ထူပူလာသည်ထိ စဉ်းစားကြည့် ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တွေကို ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်တွေးခေါ်တတ်အောင် သင်မပေးလိုက်သော၊ ပေးသမျှ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကိုသာ အလွတ်ကျက် ဖြေလာခဲ့သော ပညာရေးစနစ်ကြောင့်လား ဆိုတာ တွေးနေမိပါသည်။ ဒါတင်မဟုတ်ပါ။ တော်ကြာ ကောင်းကင်မှာ လနှစ်စင်းထွက်တော့မတဲ့။ ဘယ်နှစ်မှာတော့ဖြင့် ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မတဲ့။ နေနှစ်စင်း ထွက်တော့ မတဲ့။ ဘာတဲ့ ညာတဲ့။ သတင်းမျိုး စုံလှပါသည်။
သတိရလို့ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်လောက်က အဖြစ်အပျက်ကလေး ပြန်ပြောပြချင်ပါသေးသည်။ ကိုးရီးယားတွင် ဖြစ်ပါ၏။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက သည်နှစ်ကုန်လျှင် ကမ္ဘာပျက်ဘို့သေချာသည်။ သည်တော့ ရှိသမျှ ရောင်းချကာ အလှူအတန်းလုပ်ပစ်ဘို့ ပြောပါ၏။ တပည့်များလည်း ဘုန်းကြီးစကားနားထောင်ကာ ရှိသမျှ အကုန်ရောင်းလိုက်ကြသည်။ နှစ်ကုန်၍ ဘာမှမဖြစ်လာသောအခါ ဘုန်းကြီးက ဆောရီး ဟု ပြောလိုက်၏။ တပည့်များမှာတော့ ခွေးဖြစ်သွားသည်။
သည်အကြောင်းနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ယခင်က ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော့ဘလော့ဂ်တွင် ဖတ်ကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာများ အုတ်အော်သောင်းတင်းဖြစ်နေသည့် အက်စစ်မိုးကိုတော့ စိတ်မ၀င်စား။ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားသော radiation level ကို သွားတိုင်းနေသည့် စင်ကာပူမှ NEA (National Environment Agency) ကို အပြစ်နာနာဖို့ဘို့သာ ကောင်းပါတော့သည်ခင်ဗျား။
သူများပြောတိုင်းမယုံဘဲ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သူများ ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၀-၃-၂၀၁၁။ နေ့လည် ၁ နာရီ